टोखा घटना : पोष्टमार्टम रिपोर्टमा यस्तो देखियो ? – News Nepali Dainik
टोखा घटना : पोष्टमार्टम रिपोर्टमा यस्तो देखियो ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २७, २०७७ समय: ८:२५:३३
काठमाडौं । टोखाको ग्राण्डी भिल्ला हाउजिङमा मृ,त भेटिएका ३३ वर्षीया सुदिक्षा गिरीले पतिको ह,त्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । शुक्रवार राती भिल्लामा मृ,त भेटिएका सुदिक्षा र पति उमेश केसीको पोष्ट मा’र्टमको प्रार म्भिक विवरण अनुसार पति ह,त्यापछि आत्म ह,त्या गरेको देखिएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा गरिएको पोष्ट मा’र्टमा संलग्न चिकित्सकले आईतबार प्रहरीलाई प्रारम्भिक विवरण दिएका छन। विवरण अनुसार उमेशले ज्या’न गुमाएको १० देखी १२ घण्टापछि सुदिक्षाले आत्म ह,त्या गरेको देखिन्छ। शुक्रवार राती पौने ९ मा उनीहरुको श,व भटिएको थियो । उमेश भिल्लाको एकतला माथि बेडमा मृ,त अवस्थामा भेटिए । सो तल्लामा जाने भर्याङमा सुदिक्षा झु,ण्डिएकी थिइन् ।
अनुसन्धानमा सं’लग्न प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार चिकित्सकले उमेशको मृ,त्युको कारण ‘ब्लन्ट फोर्स इन्जुरी’ भनेका छन् । निधार माथिको भागमा चो’ट लागेको र सो चो’टका कारण ‘ओभर ब्लि’डिङ’ भएर उनको ज्या’न गएको चिकित्सकहरुको निष्कर्ष छ । सुदिक्षाको मृ,त्युको कारणचाहि ‘ह्याङगिङ’ भएको पोष्ट मा’र्टमको प्रारम्भिक विवरणबाट खुलेको छ । उमेशको ह,त्या गरेर केही घण्टापछि सुदिक्षाले आत्म ह,त्या गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिपक थापाले बताए।
थापाले भने– ‘पोष्ट मा’र्टमको लिखित रिपोर्ट आएको छैन् तर, भिल्लामा तेस्रो व्यक्तिको ईन्ट्री भएको पुष्टि भएन।’ उमेशको श,वसँगै भेटिएको सिलौटोमा र’गत र कपाल लागेको अवस्थामा प्रहरीले ब’रामद गरेको थियो। सो सिलौटो परीक्षणका लागी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको एसएसपी थापाले बताए । उनले भने- ‘राती उमेशको ह,त्या गरेर शुक्रवार बिहानीपख सुदिक्षा झु,ण्डिएको जस्तो देखिन्छ ।’
Last Updated on: January 11th, 2021 at 8:25 am
६९७ पटक हेरिएको